[OFFICIAL] Mac iPhone Indawo yoBuyiselo-Data: Indawo yoBuyiselo ususiwe iPhone Data on Mac
dr.fone toolkit - Mac iPhone Recovery Data
1st Mac iPhone kunye iPad software recovery data kwehlabathi.
Buyisa data iPhone on Mac kunye ngeendlela ezintathu.
Nako ukuzifumana abafowunelwa, SMS, amanqaku, zikhuni call, iifoto, ividiyo, njl
Ihambisana kunye iPhone zakutshanje Mac OS.
Zama It Free Zama It Free App Download
dr.fone toolkit - iPhone recovery data (Mac) sisixhobo esinamandla nesebenzayo kubasebenzisi Mac ukuvumbulula ungeno lwe data iPhone elahlekileyo.
Ngengozi kususwe into ebalulekileyo kwi iPhone yakho? Lost okanye waphula iPhone yakho? Akukho mfuneko uvalo! dr.fone toolkit (Mac), ingcali recovery data yakho Mac iPhone, into apha ukuze akuncede kwakhona iinkcukacha ezibalulekileyo ukuba wacinga yalahleka ngonaphakade.
Ukuze kwiimeko ezahlukeneyo
Le software recovery data Mac iPhone usebenza ngeziganeko ezininzi eziqhelekileyo.
walahlekelwa Data emva mveliso ubuyisele
Data ezilahlekileyo ngenxa uhlaziyo iOS
Isixhobo itshixiwe okanye ukhohlwe iphasiwedi
Zonke Iimpawu nge
Unga sebenzisa oku Mac iPhone wobuyiselo data ukuvavanya zonke data izakucinywa okanye ekuphulukwana iPhone, iPad okanye iPod wakho kwebala, uze kuqala iinkcukacha for free.
Ufuna ukulayisha ukucatshulwa iCloud ifayile elilalela? Le software recovery data iPhone for Mac ikuvumela wenze into simahla. Zama ukuba uze uyazi loo nto.
Sonke siyazi ukuba Apple awuvumeli ukuba abantu bafunde umxholo iTunes yogcino ifayile, ngoxa le software recovery data Mac iPhone wenza, kwaye simahla.
Yinto ngaphezu kokuba Mac iPhone isixhobo recovery data. Xa ufumana idata yakho isiphumo scan, unakho ukuwufunda kuqala ngqo uze uprinte isiqulatho xa isidingo esinjalo. Yinto umsebenzi unqakrazo olunye-.
Le software recovery data iPhone for Mac ikunceda ukuba ukubuyisa data ezinjenge abafowunelwa, imiyalezo, iifoto, amanqaku, ubize imbali, izikhumbuzo, imiyalezo WhatsApp, kwaye nangakumbi, ukuya iintlobo 18 ifayile.
Enoba ukuba usebenzisa i iPhone yakutshanje 7, iPad Pro, okanye iPhone omdala 4, iPad 1, lo Mac iPhone wobuyiselo datha isebenzisane ngokupheleleyo yonke imizekelo iPhone, iPad kunye iPod.
Le software recovery data iPhone for Mac kufundwa-kuphela ngokupheleleyo software. Oku kuthi, aguqule okanye ukuvuza nayiphi na idatha kwidivaysi yakho okanye kwi ifayile elilalela. Sithatha data yakho yobuqu akhawunti nzulu. Wena sihlale njalo umntu kuphela ngubani na ukufikelela kuyo.
3 Iindlela Mac iPhone Recovery Data
Ngqo scan iPhone yakho le software recovery data Mac iPhone kuqala kwakhona iinkcukacha esusiwe zikhethwe.
Exract kuqala emane kuphila yintoni oyifunayo iTunes zakho iifayile backup kwi Mac.
Umxokozelo ukucatshulwa iCloud yakho ifayile elilalela kuqala emane ukubuyisa nayiphi na into oyifunayo kulo.
Okunye nale Software Mac iPhone Recovery Data
Imbonakalo ekhoyo: Ngaphambi kokuba alulame, unakho ukuwufunda kuqala iifoto, ividiyo, imiyalezo, abafowunelwa, amanqaku, njl
yoBuyiselo Flexible: Ukubuyisa zonke okanye ezinye izinto iyafumaneka. Isigqibo ngayo.
Data Buyela Icebo: ngqo ugcine idata wachacha kwi iPhone yakho ngaphandle ukubhalwa data ekhoyo.
100% Guarantee Safe: A Mac iPhone Isixhobo recovery data yokufunda-kuphela, ayiyi kuqhubeka okanye ukutshintsha nantoni kwi iPhone yakho.
Easy ukuba Sebenzisa: Akukho izakhono computer wabuza, wonke umntu ukusebenzisa le software recovery data iPhone for Mac.
Complete iPhone soGuquguquko
Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP; Mac OS X 10.11 (El Captain), 10.10 (Yosemite), 10.9 (Mavericks), 10.8, 10.7, okanye 10.6
iPhone Indawo yoBuyiselo-Data for Mac
Indlela Buyisa Call History on iPhone (iPhone 6 Plus / 6s Okufakwe)
Indlela Buyisa iifoto esusiwe ukusuka iPhone (6s iPhone Plus Okufakwe)
Indlela Buyisa Ividiyo esusiwe on iPhone 6 (Plus) / 6 (Plus) / 5 / 5c / 5 / 4s / 4
Indlela Buyisa WhatsApp Imiyalezo kwi iPhone 6/6/5 / 5c / 5/4/4 / 3GS
Indlela Buyisa Lost okanye isusiwe iPhone Abafownelwa
Indlela Buyisa imessages ukusuka iPhone (6s iPhone Plus Okufakwe)